Iiprogram zeNzululwazi zeSikolo eziPhakamileyo zabaFundi beSikolo
Kubafundi nabazali Izinto ozenza ngaphaya kwemisebenzi
Ukuba Uthanda iNzululwazi, Ezi nkqubo zeNtshatsheli zifanelekile ukujonga
Ihlobo lixesha elide lokuhlola iimfuno zakho zesayensi. Inkqubo yehlobo ehlobo iyakwazi ukukwazisa kwiikholeji ezinokuba zikhona kwiikholeji, ukubonelela ngamava, kwaye kukunike umgca onomdla kwimisebenzi yakho kwakhona.
Iiprogram zokuhlala zasehlobo zikwayona ndlela efanelekileyo yokufunda okungakumbi malunga nekholejini kunokuba ungayifumana kwiseshoni yolwazi lweMigqibelo kunye nekhenketho yekampus, kwaye banikezela isingeniso esibalulekileyo kwiimeko zokuhlala kwikholeji. Ngezantsi ezinye iinkqubo ezibalaseleyo.
Ikomkhulu leNdawo enkulu kakhulu kwi-New Mexico Tech campus. Asagan / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Inkqubo yezoNzululwazi yeSikolo (iSSP) yiprogram yokuphuculwa kwezemfundo yokuhlala ephakamileyo abakhulileyo bezikolweni eziphakamileyo ezinikwe kwiNew Mexico Institute of Mining and Technology kwiSorocco, eNew Mexico naseKestmont College yaseSanta Barbara, eCalifornia. Ikharityhulam ye-SSP igxininise kwiprojekthi yophando yeqela ukucacisa ukuhamba kwe-asteroid, kwaye abathathi-nxaxheba bafunda iikholeji-nqanaba ye-astronomy, i-physics, i-calculus kunye neprogram. Abafundi nabo baya kwiintetho zeendwendwe baze bahambe kwintsimi. Inkqubo iqhuba malunga neveki ezintlanu. Kaninzi "
I-Science Science Institute
I-Massachusetts Institute of Technology. UJustin Jensen / uFlickr
I-Science Science Institute (RSI) yinkqubo enzulu yehlobo ephakamileyo yabafundi bezikolo eziphakamileyo ezinikezelwa yiZiko loPhumelelo kwizeMfundo kwaye zenziwa kwi- Massachusetts Institute of Technology . Abathathi-nxaxheba banethuba lokufumana lonke umjikelezo wophando ngokusebenzisa izifundo kwi-theory yenzululwazi kunye nezandla ezenzelwe uphando lwezenzululwazi kunye nezobuchwepheshe, ekugqibeleni kwiingxelo zomlomo kunye nezicatshulwa. Le nkqubo ibandakanya iveki enye yeeklasi kunye ne-five-week internship research apho abafundi baqhuba iprojekthi yabo yophando. I-RSI ayibiza iindleko kubafundi. Kaninzi "
Uphando kwi-Biological Sciences
KwiYunivesithi yaseChicago. Luiz Gadelha Jr. / Flickr
ICandelo leYunivesithi yeChilogical Sciences Collegiate Division iYunivesithi yaseChicago inikeza le nkqubo ekhethekileyo yokwenza ucwaningo lwezinto eziphilayo ngokunyuka kwamaziko aphezulu esikolweni kunye nabadala. Abathathi-nxaxheba bafunda malunga neendlela ze-molecular, microbiological kunye ne-cell biology ezisetyenziselwa kuma-laboratories anje ngekharityhulam esekelwe kwiprojekti, ukufunda izixhobo zobugcisa ezisisiseko kunye nokuzifaka kwiiprojekthi zeqela ezizimeleyo ezinikezelwa ekupheleni kwekhosi. Abafundi abaningana ngonyaka banamenywa emva konyaka olandelayo ukuba basebenze kunye nososayensi yocwaningo lweYunivesithi yaseChicago. Inkqubo iqhubela iiveki ezine, kwaye abafundi bahlala kwiiyunivesithi. Kaninzi "
Inkqubo yeCandelo loPhando loLutsha lweSikolo
Ukwakhiwa kweKhemistry kwiYunivesithi yaseStony Brook. Atomichumbucker / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Ukukhuthazwa nokuzimela ngokuzimeleyo ukunyuka kwabafundi abakhulileyo besikolo bangaba nomdla ekuhloliseni uphando lwezenzululwazi kwiSyunivesithi yaseStony Brook kwiiveki ezisixhenxe zeeSeshoni zoPhando lweSikolo. AbakwaSimons Abazalwana bachitha ihlobo basebenzisana ngqo kunye nomcebisi wezobuchule, bebambisana neqela lophando kwaye baphishekela iphrojekthi yocwaningo oluzimeleyo ngelixa befunda malunga neengcamango zophando lwebhanki kwimiboniso yophando, iindibano zocweyo, iindwendwe kunye nezinye iindibano ezizodwa. Ekugqibeleni kwenkqubo, ngamnye umfundi ubonisa uphando olubhaliweyo kunye nopopota wophando ngokufingqa umsebenzi wabo. Kaninzi "
I-Rosetta Institute i-Biology Biology ye-Cancer Workshop
I-Rosetta Institute ye-Biomedical Research ixhasa abafundisayo abathathu abaneminyaka engama-13-18 kwi-biology ye-molecular cancer e- UC Berkeley , Yale University kunye ne- UCLA . Ngeentetho kunye nokuhlolwa kweelabhoratri, abaxhamli beenkampu bahlola iingcinga ezisisiseko ze-biology cell biology kunye nendlela ukuphuhliswa komhlaza kuthintela ngayo ezi zakhiwo kunye neenkqubo. Abafundi bafaka ezi ngcamango ngokuzivelisa ngokwenza iiprojekthi zabo zophando, ezinikezelwa ekupheleni kweeseshoni ezimbini zeveki. Kaninzi "
IYunivesithi yaseMassachusetts Summer Academy kwi-Chemistry Forensic
IYunivesithi yaseMassachusetts Amherst. Ofisi yaseMassachusetts yohambo kunye neKhenketho / Flickr
Abafundi abhalise kwi- Academic Sciences yaseMass Amherst yeeveki ezimbini kwi-Chemistry Forensic bafumana izandla-qeqesho kwiindlela ezikhoyo zenzululwazi ezisetyenziswa kwii-laboratory zamandulo. Ziya kwiintetho kwaye ziqhuba iimvavanyo ngezihloko ezinjenge-chemical chemistry, analysis analysis of debris, i-toxicology, uhlalutyo lwe-DNA, kunye nokuprinta iminwe kunye nokufunda malunga nemithetho esemthethweni yezobuchwepheshe kunye nemfundo kunye noqeqesho olufunekayo ukuze kuqhutywe phambili umsebenzi kwi-forensics. Ekupheleni kweiveki ezimbini, umfundi ngamnye ubonisa iphrojekthi ethile yenkomfa kummandla othile we-chemistry. Kaninzi "
I-Boston Leadership Institute: Uphando lwezoBomi
University of Bentley. Allen Grove
Inkqubo yeflethi ye-Boston Leadership Institute, le nkqubo yiklasi yeeveki ezintathu kwi-biological research. Imisebenzi ifaka izandla kwi-laboratory, kwiiholide ezizimeleyo kunye neendawo ezihambayo kwiindawo ezahlukahlukeneyo ngeBoston, kunye namaphepha ophando olunzulu kunye neentetho. Le khosi ifundiswa nguWhitney Hagins, uthisha we-biology ophumelela kwiziko eliphakamileyo eliphakamileyo kweli lizwe. Abafundi banokukhetha ukuhamba okanye ukuhlala kwenye yeehholo zokuhlala kwiYunivesithi yaseBentley eWaltham, eMassachusetts. Kaninzi "
IiNkqubo eziMnandi zoMculo zaseNkolweni zabaPhakamileyo beZikolo
I-Easter kwiCawa yamaKatolika
Yiyiphi intonga kunye neReel kufuneka ndiyithenge